Vaovao - Ny famoahana feno ny dividends amin'ny fanarenana, ny tanjaka feno dia nihatsara
Ao amin'ny orinasan-tsolika porcelain elektrônika herinaratra mahery Tangshan, mierona ny milina atrikasa, ny tsipika famokarana miasa tanteraka. Tao amin'ny atrikasa lena, talohan'ny midsummer, ireo mpiasa manao tanany fohy dia mifafy mafy, miasa andro mba hanao baiko. Eny ivelan'ny trano fanatobiana entana, ny rohy fandefasana dia be atao sy milamina. Satria ny sary famantarana BBMG dia hita eny rehetra eny amin'ny orinasa, ny kolontsaina BBMG miaraka amin'ny kolontsaina miasa satria ny fotony dia nampidirina tao am-pon'ny mpiasa tsirairay.
Tamin'izany fotoana izany, ny BBMG dia namonjy ny orinasan-tsolika porcelain elektrônika avo lenta eny an-tsisin'ny fatiantoka. Nandritra izay efa-taona namboarina izao, BBMG dia nanome orinasan-tsolika paositera elektrika avo lenta ho an'ny famatsiam-bola, fananganana ekipa talenta, ary famahana ireo olana tavela tamin'ny tantara, ka nahatonga ireo orinasan-tsolika porcelain elektrika avo lenta napetraka tao ady, mahatsapa fiovana mahafinaritra amin'ny bankiropitra mankany amin'ny tombom-barotra.
Ny lazan'ny BBMG Group, ny fiantraikan'ny marika an-trano sy iraisam-pirenena ary ny tanjaky ny fidiram-bola an-jatony miliara maro no nahatonga ny orinasan-tsolika hamafin'ny paositera elektrika avo lenta an'ny fianakavian'i BBMG Group nahazo ny mpanjifa taorian'ny enin-taona nangina tao amin'ny tsenan'ny insulator porcelain mahitsy. Ny fahatokisan'ny orinasa dia eken'ny tsenan'ny State Grid miaraka amin'ny sakana avo lenta sy takiana avo lenta ho an'ny lazan'ny orinasa sy ny kalitaon'ny vokatra. Tamin'ny volana febrily 2018, ny orinasan-tsolika porcelain elektrika mahery vaika dia nahazo ny tolotra ho an'ny Tetikasa State Grid Direct Recruiting Zhangbei Flexible DC Project, tetikasa fampisehoana fanalahidy voalohany an-trano. Ny State Grid Pass dia maneho ny toeran'ny orinasan-tsolika porcelain elektrônika avo lenta amin'ny sehatry ny porselana tsanganana mahitsy no nohatsaraina. Ao amin'ny tetikasa DC22 Winter Olympics malefaka DC, ny fanjifàna orinasan-tsolika porcelain elektrika dia manome 50%. Hatramin'ny niorenan'ny orinasan-tsolika porcelain elektrônika avo lenta dia nahazo tolotra avo lenta ny State Grid. Ny vatan'ny fanjakana no laharana voalohany amin'ny indostria, ary ny fidiram-bola dia nitombo hatramin'ny 102% isan-taona. Electric Porcelain insulator Company dia namerina ny tsenan'ny insulator ceramic insulator izay tapaka nandritra ny taona maro, ary ny fidiram-bolany dia nitombo 70% isan-taona. Hatramin'ny volana oktobra 2019, ny orinasan-tsolika porcelain elektrika mahery vaika dia namerina tamin'ny laoniny tanteraka ny mpanjifa rehetra amin'ny tsena telo lehibe amin'ny tsenambola nasionaly, ny tsenan'ny switchyard ary ny tsena ivelany.
Ny orinasan-tsolika porcelain elektrônika mandeha amin'ny herinaratra avo lenta, mba hanatsarana ny kalitaon'ny asa sy hanatsarana ny fifaninanana tsena, dia nanamafy ny ezaka fitantanana amin'ny fampihenana ny vidiny sy ny fampitomboana ny fahombiazany. Ao amin'ny fanavaozana ny famolavolana drafitra, ampitomboy ny tahan'ny fampiasana ny lafaoro, hanafohezana ny fotoana fandefasana entana ary hampihena ny fanjifana lasantsy; amin'ny famolavolana kojakoja vy, soloina ny vy tsy misy fangarony amin'ny aliminioma mba hampihenana ny vidin'ny famarotana. Amin'izao fotoana izao, ireo paosin-tsivalana 3 tapitrisa mahitsy apetraka amin'ny tsena dia azo antoka fa hihazakazaka miaraka amin'ny lozisialy zero. Amin'izao fotoana izao, ny fahaizan'ny famokarana herinaratra misimisy amin'ny alikaola elektrika dia mitana ny laharana faharoa ao amin'ny firenena, ny fizotry ny famokarana dia mitana ny laharam-pahamehana eo amin'ny sehatry ny indostria, ny kalitaon'ny vokatra dia mitana ny laharana telo voalohany ao amin'ny firenena, ary ny fifaninanana eo amin'ny tsena sy ny marika mitombo hatrany ny fitaomana.
Fotoana fandefasana: Jul-10-2020